Emuva kokuhlulwa kabili kulandelana kwimidlalo yokuqala ye-T20 Tri-Series, ama-Momentum Proteas abuye kahle ngesikhathi benqoba ngama-wicket ayisithupha bedlala ne-England ngoMgqibelo.
Kubongwa abathola o-50 ovulayo u-Lizelle Lee owashaya ama-runs angu-68 emabholeni angu-32, ne-all-rounder u-Suné Luus (63) owathola u-50 wakhe wesibili wama T20I, i-South Africa yanqoba okwesibili idlala ama-T20 internationals ne-England.
Kulandela izinxoxo phakathi kwabadlali nabaqeqeshi, usekela mqeqeshi u-Salieg Nackerdien uyajabula ngomdlalo weqembu kumdlalo wabo wesithathu emuva kokuqala ngokuphoxeka.
“Sikhulume ngezinhlelo zethu njengethimba labaphosayo, ngokujwayela i-wicket,” esho. “Besazi ukuthi sidlala kwi-wicket efanayo futhi besifuna ukuzinikela kahle kanye nokuphendula amakhono ethu.”
“Okufanayo nasekushayeni, sikhulume ngokutshengisa inhloso siqeqesha kanye nokwenza isiqiniseko ukuthi bona (abadlali) bayazithemba uma beyoshaya ngaohezulu noma umdlalo wokushintshana.”
“Siyajabula ngendlela abenzangayo,” esho ejabula.
Uma ebuzwa ngalokhu okukhombisile okuhole ama-Proteas aphumelele, u-Nackerdien ukuhlanganise namacebo eqembu kuyela emdlalweni, abaphosayo behlela isikhonkwana esilungile.
“Sikhulume ngokungabonakali kanye nokushintshashintsha futhi u-Dané (Van Niekerk) ukwenze kahle,” echaza. “u-Raisibe (Ntozakhe) uqale kahle futhi waqhubeka waphosa ama-overs amane, okuhlele ukuqhubeka kwe-innings.”
“Singaphinde sikhulume ngomdlali omncane (u-Zintle) Mali, owaphosa kahle. Siyakujabulela lokho kanye nabo bonke abaphosayo abadlala indima.”
“Uma ubukwa okwenzeka ngalelalanga, kwakunomehluko omkhulu kunalokhu okwenzeka emidlalweni edlule ngamakhono ethu kanye nendlela esadlalangayo ngasekuphoseni,” enezezela.
Ngasekushayeni, lo owayeqeqesha i-Western Province senior professional side uthe abashayayo benziwe ukuchitha isikhathi esiningi kuma-nets, begxile ekushayeni okunamandla. Bejaha umphumela weqembu lasekhaya lama-runs angu-160 kusele amabhola amathathu, beshaya o-four abangu-23, kanye no-six abayisishagalombili. Kuphinde kwaba umphumela omkhulu i-South Africa ewujahile yaphumelela kuloluhlobo lwekhilikithi.
“Uma kuqeqeshwa, sisebenze kakhulu ekushayeni amabhola amade, ukusebenza kwinto ehlelekile kanye nokuqiniseka ukuthi sikhetha kahle futhi silishaya kahle ibhola,” eqhubeka. “Bekukuhle ukubona ukuthi i-average yokushaywa kwama-boundaries ibiyinhle futhi yenzeka njalo, kwi-power play naphakathi komdlalo kanye nasekugcineni. Ngethemba singaqhubeka ngalapho.”
“Kuphinde kwakuhle ukubona kugijinywa phakathi kwama-wicket – esakhuluma ngapho ngaphambi komdlalo – bekungcono,” enezezela u-Nackerdien.
Akubanga ukushaya nokuphosa kwabesifazane kuphela ukuhlolwe usekelamqeqeshi, uphinde wabheka ukudlala kwe-South Africa enkundleni. Ngaphandle kokuphuthelwa amathuba ambalwa, u-Nackerdien ukholwa ukuthi iqembu lakhe lisendleleni elungile ebe egcizelela ukubaluleka kokujabulala ukuvimba.
“Bekunama-boundaries ambalwa esiwadlulisile,” esho. “Kodwa sithe kubadlali, kumele siqale sijabulele ukuvimba kanye nokufunda kokudlule. Uzokujabulela kanjalo. Awukwazi ukushaya nokuphosa kuphela.”
“Ukuvimba kuphinde kwakhe amathuba futhi kungashintsha imidlalo ngokushesha nokusibeka ngaphambili. Lokho kuthuthukise lomdlalo,” ephawula u-Nackerdien.
Emuva kwemidlalo emibili, yokuhlulwa ngamarekhodi i-England ne-New Zealand kwi-double-header ngesonto elidlule, abaphathi nabaqeqeshi babenomsebenzi omningi ukubuyisa abadlali kumqondo olungile ngaphambi kwemidlalo esele kwi-triangular series.
“Sihlale odabeni lokuthi singazuzani njengeqembu nokuthi sifuna ukusebenzelani, okuyi(T20) World Cup ngoNovember,” eqhubeka u-Nackerdien. “Sikhulume ngokuthatha umthwalo. Ekupheleni kosuku, ukwazi indawo yakho ngokuthi kudingekani ngamakhono akho.”
“Kuphinde kube ukukholwa, ukukholwa ebesidinga ukwakha njengeqembu kanye namalunga eqembu. Lokho kusize kakhulu,” enezezela.
i-South Africa izodinga ukunqoba kakhulu uma bedlala ne-New Zealand, uma befuna ukufika kwi-final ye-Tri-Series futhi u-Nackerdien ukholwa ukuthi ikhefu lezinsuku ezinhlanu ngaphambi kwalowomdlalo kuzonika abadlali isikhathi esiningi ukucabanga ngomdlalo wabo, njengoba bebheke ukuyivala kahle i-tour e-England ngaphambi kwi-ICC Women’s World T20.
“Uma siqala amalungiselelo ngoLwesibili, kuzobaluleka ukungena endaweni enhle esasikuyona futhi senze umsebenzi wethu,” esho.
“Kubaluleke kakhulu ukuthi sivala i-series ngokuzithemba futhi sakhele kulokhu esifuna ukukuzuza ekupheleni konyaka. Ngakho ngethemba, uma konke kungena endaweni yakho futhi abadlali bawenzakahle umsebenzi wabo, sizothola imiphumela emihle futhi nemiklomelo,” evala.
Ama-Proteas azobe ebheke omunye umdlalo oncomekayo, uma bebhekana nama-White Ferns ngoLwesine, uma besebenzela ukudlala kwi-T20 Tri-Series final ngeSonto.
u-Luus no-Lee bagcina amathemba e-SA kwi-Tri-Series i-South Africa ibheke ukubuyela isimweni emuva kokuyiqala kabi i-tri-series Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series Amakhulu ka-Taylor no-Beaumont asize i-England ilinganise i-series Moreeng praises Proteas women but wary of ‘wounded’ England as they look to clinch the series Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe